Balong 5000: Modemkii 5G ee ugu horreeyay ee Huawei | Androidsis
Huawei wuxuu soo bandhigayaa Balong 5000, oo ah 5G modem
Huawei waa mid ka mid ah noocyada ugu badan ee ku lug leh horumarinta 5G Dunida oo dhan. Halka soo saaraha Shiinaha uu la kulmay dhibaatooyinka ku filan Ilaa hadda. Laakiin sidoo kale waxaa jira dalal kalsooni ku qaba astaanta. Waxaa la filayaa in bilaha soo socda ay soo bandhigi doonaan taleefannadooda ugu horreeya iyagoo taageero ka helaya tikniyoolajiyadan. In kasta oo tan ay suurtagal tahay, waxaad u baahan tahay modem. Modemkaan ayaa horeyba rasmi ah.
Waxay ku saabsan tahay Balong 5000, taas oo ah waxa loo yaqaan 'modem 5G' ee Huawei. Shirkadda ayaa ku soo bandhigtay Shiinaha. Laakiin waxaa la sheegay inaan sidoo kale filan karno soo bandhigid MWC 2019 oo ka socota magaalada Barcelona, ​​bil gudaheed.
Muddo bilo ah ayaa la sheegay in sumadda Shiinaha ay soo bandhigi doonto a casriga leh 5G ee MWC 2019. Hadda moodeemkani waa rasmi, suurtagalnimadaasi way sii kordheysaa. Hadda ma jiraan wax faahfaahin ah oo ku saabsan casriga la sheegay. Sida Balong 5000, astaanta ayaa ku qeexaysa sida 5G modem ugu awoodda badan suuqa.
Muuqaalka ugu muhiimsan ee modemkan Huawei waa inuu awood u leeyahay inuu taageero labadaba is-maamul (SA) iyo qaab-dhismeedka shabakadda ee aan-madax-bannaaneyn (NSA) 5G. Marka waxay awood u leedahay inay daboosho dhammaan shabakadaha. Tani waxay u maleyneysaa inaad horeyba ugu diyaar garowday geynta shabakadahan, maxaa dhici lahaa 2020.
Hadda Huawei ma soo bandhigin dhammaan faahfaahinta Balong 5000. Waan ognahay inay taageero u yeelan doonto FDD iyo TDD. Intaas waxaa sii dheer, xawaareheeda waxay ku dhaaftaa dareemo wanaagsan. Waxay awood u yeelan doontaa inay gaarto 4,6 Gbps qeybta sub-6Ghz iyo 6,5 Gbps mmWave. Kuwani waa ugu yaraan cabbirada Shiinaha ee ilaa hadda la sameeyay. Intaa waxaa sii dheer, waa inaan ku darno inay ku timaaddo taageerada V2X, isgaarsiinta isku xirnaanta gawaarida.
Kuwani waa dhammaan faahfaahinta nagu soo degtay illaa hadda ee ku saabsan Balong 5000, Hemem-kii 5G ee ugu horreeyay ee Huawei. Hadday run tahay, MWC 2019 waxaan awoodi doonnaa inaan wax badan ka baranno. Nooca Shiinaha ayaa xitaa soo bandhigi kara nooc horey u heystay. Ma ogin, laakiin waxaan rajeyneynaa inay dhowaan jiri doonaan xog dheeri ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Huawei wuxuu soo bandhigayaa Balong 5000, oo ah 5G modem
Codsiyada Android si aad uga hesho Instagram
Vivo APEX 2019: Telefoon cusub oo aan lahayn badhanno, dekedo ama boosas